बिध ल्याबका भण्डारी भन्छन्– ‘सबै निजी ल्याबलाई प्रति कोभिड टेस्ट ५ सय नाफा दिएर काम गर्न तयार छु’
‘सरकारले अनुमति दिए १५ दिनमा ६ सय बेडको कोरोना अस्पताल बनाउँछौं’
नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जाँदा स्थापना भएको बिध ल्याबले छोटो समयमै लोभलाग्दो सफलता र लोकप्रियता कमायो ।
कोरोना महामारी बढ्दै जाँदा सरकारले निर्धारण गरेको पीसीआर परीक्षण शुल्कमा निजी अस्पताल तथा ल्याबहरूले परीक्षण गर्न नमानिरहेको अवस्थामा बिध ल्याबले फरक तरिकाले सेवा दिइरहेको छ ।
सरकारले तोकेको भन्दा पनि सस्तो शुल्कमा यस ल्याबले पीसीआर परीक्षण गर्दै गर्दा ल्याबको लोकप्रियता बढ्दै गएको हो ।
कोरोना महामारीकै बीचमा स्थापना भएको यस ल्याब र यसका भावी योजनाका बारेमा लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटाले बिध ल्याबका अध्यक्ष बिके भण्डारीसँग कुरा गरेका छन् । ​प्रस्तुत छ, भण्डारीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कोरोना महामारी शुरू भएसँगै बिध ल्याब सञ्चालनमा ल्याउनुभयो, यो कन्सेप्ट कसरी आयो ?
नेपालमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको थियो । त्यतिखेर सरकारले लकडाउन गर्‍यो । त्यतिबेला निजी प्रयोगशाला थिएनन् ।
कोरोना संक्रमण दर दिनदिनै बढ्दै जाँदा सरकार एक्लैले कोरोना परीक्षण गरेर धान्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यतिखेर सरकारी प्रयोगशालाहरूमा २५ हजारसम्म स्वाब नमूना होल्ड हुन्थे ।
त्यसैकारण हामीले जेठ १६ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यसको एक महिनापछि मन्त्रालयले एलओवाई दियो । उसले १५ दिनभित्र ल्याब बनाउनू भनेर एलओवाई दिएको थियो । हामीले ५ दिनमै ल्याब बनायौं ।
त्यसपछि हामीले अनुगमन गर्नका लागि मन्त्रालयलाई बोलायौं । एक हप्तापछि उसले आएर अनुगमन पनि गर्‍यो र लाइसेन्स दियो ।
कोरोना परीक्षण कहिलेदेखि शुरू गर्नुभयो ?
जतिबेला नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर एकदमै कम थियो । त्यतिबेला निजी क्षेत्रहरू यसमा थिएनन् । हामीले कोरोना नियन्त्रणमा निजी क्षेत्रको भूमिका रहन सक्छ भनेर नै यो कन्सेप्टलाई अगाडि सारेका हौं ।
साउन १३ गते लाइसेन्स पायौं र साउन १५ गतेदेखि दैनिक रुपमा कोरोना परीक्षणमा सहभागी बन्यौं ।
हामीले शुरूका दिनमा दिनमा ६/७ सय पीसीआर परीक्षण गर्दथ्यौं, अहिले त्यो संक्रमण दर बढ्दै जाँदा परीक्षण दर पनि बढ्दै गएको छ । हामीले अहिले दिनको १५/१६ सय परीक्षण गर्दै आइरहेका छौं ।
कोरोना परीक्षण गर्दै जाँदा शुरूमा सरकार र हामीबीच अलिकति द्वन्द्वजस्तै भयो । सरकारले पोजेटिभ केस पोजेटिभ देखिएको व्यक्तिलाई शुरूमै जानकारी नगराउनु, ईसीडीलाई जानकारी गराउनु भनेको थियो । हामीले शुरू देखि नै पोजेटिभ केस सम्बन्धित संक्रमित, उसका परिवारलाई खबर गर्ने गरेका थियौं ।
सम्बन्धित संक्रमित व्यक्तिलाई शुरूमै थाहा दिन सकिएमा उसले सावधानी अपनाउँछ र अन्यलाई सर्ने जोखिम कम गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । अहिले पनि हामीले त्यही गरिरहेका छौं ।
हामीले जुन ट्रेण्ड बसाल्यौं, सरकारले त्यसलाई नै आधार दियो र उसले अहिले संक्रमित भएको जानकारी शुरूमै सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन थाल्यो ।
बिध ल्याबको क्षमता कति हो ? कस्ता सुविधाहरू समावेश छन् ?
बिध ल्याबमा हामीले अहिले दैनिक ४ हजार जनाको कोरोना परीक्षण गर्न सक्छौं । शायद नेपालमा भएको सबैभन्दा ठूलो ल्याब हाम्रै हो । यस्तै काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका करीब ९० प्रतिशत अस्पतालले पीसीआर परीक्षणका लागि हाम्रोमा पठाउनुहुन्छ ।
हाम्रो आफ्नै स्वाब कलेक्सन सेन्टर रहेको छ । दिनमा ५/६ सय जनासम्मको स्वाब कलेक्सन अहिले पनि भइरहेको छ र त्यो परीक्षण पनि हुन्छ ।
अन्य ल्याबहरूको भीडमा बिध ल्याब के कारणले भिन्न छ ? कस्तो सेवा दिइरहेको छ ?
पहिलो कुरा हामीले रिपोर्ट सेम डेमा दिइरहेका छौं, अरूले यसो गरेका छैनन् ।
उनीहरूले २४ घण्टा वा ४८ घण्टामा दिने गरेका छन् भने हामीले परीक्षण गराएकै दिनमा रिपोर्ट दिन्छौं । ४ हजार जनाको नै परीक्षण गर्दा पनि एकै दिनमा रिपोर्ट दिन हामी सक्षम छौं, तयार छौं । अहिले अधिकतम दिनको २ हजार हाराहारीमा परीक्षण गरिरहेका छौं र रिपोर्ट दिइरहेका छौं ।
यस्तै, हामीले प्रत्येक संक्रमितको छुट्टै साइट जेनेरेट गरेर एसएमएस मात्रै हैन कि, छुट्टै फाइल नै जेनेरेट गर्ने सफ्टवेयर जेनेरेट गरेका छौं । जसले हाम्रो साइटमा जान्छ, रजिस्टर गर्छ, अनि आफ्नो युजर आईडी र पासवर्ड हानेर लगइन गरी आफ्नो रिपोर्ट पूरै हेर्न सक्छ । अन्य ल्याबहरूमा भने सम्बन्धित व्यक्ति सम्बन्धित ठाउँमै जानुपर्छ, तर हाम्रोमा ल्याबमा आइरहनुपर्दैन ।
यस्तै हामी गुणस्तर र समयमा एकदम सचेत छौं । कोही समयमा विभिन्न अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, अस्पतालहरूलाई । त्यस्ता प्रकृतिलाई हामी संवेदनशील रुपमा लिएर काम गर्छौं ।
यस्तै गुणस्तरको कुरा गर्दा हामी विश्व स्वास्थ्य संगठनले लिस्टेड गरेका किट प्रयोग गर्छौं । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हाम्रो मुलुकमा अहिले रहेका थुप्रै ल्याबहरूले त्यो किट प्रयोग गर्दैनन् । नेपालका कुनै पनि अरू ल्याबले त्यस्तो किट अघिल्लो हप्तासम्ममा प्रयोग गरेका छैनन् ।
हामी कोभिड मात्रै परीक्षण गर्ने ल्याब हौं । कोभिड परीक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता राख्छौं । अरूहरूको ध्यान अन्य सेवामा पनि हुन्छ तर हामी कोभिडमा नै केन्द्रित छौं ।
यस्तै हामीसँग दक्ष जनशक्ति हुनुहुन्छ । धेरै ल्याबहरू छाडेर कोरोना परीक्षणका लागि उपभोक्ता हामीकहाँ आउनुहुन्छ । हाम्रो प्राविधिक टीममा मात्रै २८ जना हुनुहुन्छ । हामीसँग क्वालिफाइड टीम छ ।
नेपालस्थित डब्लूएचओको कार्यालयले हाम्रो ल्याबलाई लिस्टेड गर्दा नेपालकै सबैभन्दा बेस्ट ल्याब भनेर अवार्ड दिएको छ । जुन प्रतिवेदन अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन, तर हामीलाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी आइसकेको छ ।
सरकारले तोकेभन्दा थोरै शुल्कमा परीक्षण गर्दैहुनुहुन्छ नि !
सरकारले कुनै बेला कोरोना परीक्षण शुल्क ५५ सय तोकेको थियो, हामीले त्यतिबेला ४ हजारमा परीक्षण गर्‍यौं । त्यसपछि सरकारले ४४ सय रेट तोक्यो, हामीले घटाएर २ हजारमा झार्‍यौं । अहिले हामीले १९ सय ९९ मा परीक्षण गर्छौं ।
घाटा खान त कसैले पनि व्यापार गर्दैन । तर फाइदा खाने पनि एउटा सीमा हुन्छ । थोरै फाइदा खाऔं र धेरैलाई सेवा दिन सकौं भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गर्न सकेमा कोभिड नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ ।
म अरू निजी ल्याबहरूलाई अझै आग्रह गर्छु, शुल्कमा अझै पुनर्विचार गरौं, कम गरौं, थोरै फाइदा, धेरै सेवा दिनेगरी काम गरौं ।
केही समयदेखि बिध ल्याबलाई जोडेर विभिन्न खाले समाचारहरू आइरहेका छन्, त्यसप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
पछिल्लो समय केही निजी स्वार्थ भएका ल्याबहरूले केही मिडियालाई गलत ढंगले प्रयोग गरी भ्रामक समाचार प्रकाशित गरे । बिध ल्याबले क्वालिटी दिन सकेन, उसको क्वालिटी कम भएर उसले कम शुल्कमा गरेको हो, हामीले त्यो शुल्कमा गर्न सक्दैनौं भनेर उनीहरूले भनेका रहेछन् । जसलाई केही मिडियाले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन पनि गरे ।
म अन्य निजी ल्याबलाई चुनौतीका साथ के भन्छु भने, तपाईंहरूको ल्याब मलाई दिनुहोस्, तपाईंहरूले प्रयोग गरेकै किट म प्रयोग गर्छु, तपाईंहरूको जनशक्ति नै म प्रयोग गर्छु । तपाईंको जनशक्तिलाई १० प्रतिशत तलब बढाएर दिन्छु । यसरी हेर्दा म १५ सयमा परीक्षण गर्छु, तपाईंलाई ५ सय नाफा दिनेगरी २ हजार शुल्क लिनुस् ।
हामी मेडिकल क्षेत्रमा भर्खरै आएका हौं । मेडिकल क्षेत्रमा आफूलाई हिरो हौं भन्नेहरू भन्दा स्वाभाविक रूपमा हामीले उनीहरूले भन्दा कम शुल्कमा, कम समयमा, सहज तरिकाले नै काम गराइरहेका छौं, त्यसकारण उनीहरूलाई बेचैन भइरहेको हो । उनीहरूले बिध ल्याबको बजार खस्काउनका लागि जुन फण्डा रच्नुभयो, उहाँहरूलाई म चुनौती दिन्छु ।
यस्तै, जो ममाथि आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म भन्छु, तपाईंहरू रिसर्च, अनुसन्धान गर्नुहोस्, नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले लिस्टेड गरेको किट क–कसले प्रयोग गर्छन् ? यसमा रिसर्च गर्नुस् ।
अबको भावी योजना कस्तो छ ?
ल्याब सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि हामी पूरै अध्ययन अनुसन्धान गरेर आएका हौं । हामीले कोभिडको मात्रै हैन फूलफेजको ल्याब यो महिनाभित्र नै लञ्च गर्ने योजनामा छौं । दशैं र तिहारको बीचमा लञ्च गर्न लागेका हौं । हामी त्यसका लागि सरकारी निकायमा प्रक्रिया शुरू गराइसकेका छौं ।
क्षमताको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो ल्याब हामी हौं । अहिले परीक्षणका लागि भारत लगायतका देशहरूमा जान्छन्, त्यसो गर्दा समय र खर्च त्यसै भइरहेको छ । यसको परीक्षण नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हामीमा छ, खर्च पनि जोगिने, समय पनि बच्नेगरी काम गर्नेतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं ।
कोभिड विशेष ल्याबमात्रै नभएर अस्पताल पनि बनाउने कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो कुरा कुरामै सीमित भयो कि, तयारी हुँदैछ ?
सरकारले निर्णय गर्दा उनीहरूका केही सीमा पनि हुन सक्छन् । हामीले प्रस्ताव पेश गरेका छौं । तर मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छैन ।
शायद सरकारले निजीलाई नदिने, हामी आफैं धान्न सक्छौं भनेर पनि हुन सक्छ । यदि त्यसो हो भने म सरकारलाई स्यालुट गर्छु ।
यदि निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्ने हो भने मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, सरकारले हुन्छ भनेको १५ दिनमा ६ सय बेडको अस्पताल बनाउँछौं ।
हामी यसमा सक्षम पनि छौं । यसको लिखित प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ ।